यी ९ गल्ती जसले कलेजो खराब गर्छ - IAUA
यी ९ गल्ती जसले कलेजो खराब गर्छ
ramkrishna January 3, 2018	health tipsयी ९ गल्ती जसले कलेजो खराब गर्छ
कलेजो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंगमध्ये एउटा हो । यसले हाम्रो शरीरबाट विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकालेर शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
कलेजोले रगत शुद्धिकरण गर्नका साथै रगतको लागि आवश्यक प्रोटिन बनाउँछ । यदि कलेजो स्वस्थ्य भएन भने हर्मोनको सन्तुलन विग्रन्छ र रोग पैदा हुन्छ ।
कलेजो कति महत्वपूर्ण अंग हो भने, यसले क्षतिग्रस्त कोषहरुलाई प्रतिस्थापन गरिदिन्छ । तर, त्यही कलेजो सधै जोखिममा हुन्छ, हाम्रो आनीवानीका कारण । जानेर वा नजानेर गरिने कतिपय गल्तीले कलेजोलाई यति क्षतिग्रस्त तुल्याइदिन्छन् कि त्यसलाई ठिक पार्न असम्भव हुन जान्छ ।
१. प्रशोधित खाना
अहिले हाम्रो भान्सामा प्रसोधित खाना हावी हुँदै गएको छ । जबकी यस्तो खाना कलेजाको लागि अनुकुल हुँदैन । प्रशोधित खानामा भुपूर मात्रामा पि्रजर्भेटिब्स, एडिटिब्स र आर्टिफिसियल स्वीटनर्स हुन्छन् जसले कलेजोलाई हानी गर्छ ।
२. नास्ता नगर्नु
सुन्दा सामान्य लाग्छ । तर, बिहानको नास्ता नगर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकार हुनछ । बिहान हाम्रो शरीरमा इनर्जी कम हुन्छ । अतः नास्ता गरिएन भने त्यसको भार कलेजोले झेल्नुपर्छ । नतिजा, कलेजो खराब हुन्छ ।
३. औषधिको अत्यधिक सेवन
सानोतिनो रोग-बिराममा औषधी खाइहाल्ने बानी छ हाम्रो । टाउको दुख्नसाथ, रुँघा लाग्नसाथ, पेट दुख्नसाथ, पखला लाग्नसाथ हामी औषधी खान्छौ । त्यती मात्र होइन, चिकित्सककै प्रेस्किप्सन बिना पेन किलर खाने बानी पनि छ । यसले कलेजोलाई सोझै असर गर्छ ।
४. कम निद्रा
जर्नल अफ एनाटोमीमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार निद्राको कमिले गर्दा कलेजोमा अत्याधिक दबाव पर्छ । कलेजोका साथसाथै आफ्नो शरीरका अन्य अंगहरुलाई पनि ठीक राख्नका लागि हामीले ८ घन्टा अनिवार्य निदाउनु आवश्यक छ ।
५. अत्यधिक प्रोटीनको सेवन
अनुसन्धानले देखाएको छ कि अधिक मात्रामा प्रोटिन सेवन गर्नुले शरीरलाई नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ । पर्याप्त कार्बोहाइड्रेड बिना ज्यादा प्रोटिनको सेवन गर्दा कलेजोसँग जोडिएका समस्याहरु बढ्न सक्छन् । त्यसैले मासु र अन्डाको साथै हरियो तरकारी र स्टार्च पनि भरपूर मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ ।
मोटोपना पनि कलेजोको लागि खतरनाक हुन्छ । बढि खाना खानाले शरीरमा बोसो बढेर जान्छ जुन स्टोरिङ सेलबाट बाहिर आएर कलेजोमा जम्मा हुन थाल्छ । यसबाट कलेजो बिग्रिन थाल्छ ।
यति मात्र होइन, कलेजोमा बोसो जम्मा भयो भने मुटुरोग र क्यान्सरको खतरा पनि बढेर जान्छ । त्यसैले आफ्नो आहार र एक्सरसाइजमा ध्यान दिनुपर्छ । यी दुई कुराहरुमा ध्यान दिइएन भने तपाईंको मोटोपना बढ्न सक्छ र कलेजोलाई असर पुर्‍याउँछ ।
७. मदिरा सेवन
रक्सी हाम्रो कलेजोको सबैभन्दा ठूलो सत्रु हो । यसले कलेजोका लागि मन्द विषको जस्तो काम गर्छ । आवश्यकताभन्दा बढि रक्सी पिउने हो भने कलेजोको कार्यक्षमता घट्छ र यसले शरीरबाट सही ढंगले टक्सीन्स निकाल्न असमर्थ हुन्छ ।
चुरोटले कलोजोलाई अप्रत्यक्ष रुपबाट प्रभावित पार्दछ । चुरोटको धुवाँमा पाइने विषाक्त केमिकल्सहरु अन्तमा कलोजोसम्म पुग्छन् र कलेजोका कोषहरुलाई हानी पुर्‍याउँछन् ।
कसरी गर्ने कलेजोको सफाई ?
कागतिमा साइटि्रक एसिड हुन्छ । कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि यो पनि निकै उपयोगी हुन्छ ।
आलु बखडामा रहेको एन्टिअक्सिडेन्ट पि|m रेडकल्सले कलेजोलाई रक्षा गर्छ ।
बन्दामा रहेको सल्फरले कलेजोको फोहोर हटाउन सहयोग गर्छ ।
Previous Previous post: कसरी मेटाउने गुगलमा सर्च गरेका राम्रा/नराम्रा कुराहरु ? यसो गर्नुहोस्
Next Next post: एउटा स्याउ दैनिक खाँदा हुन्छ यी लाभ